Cawayska Washington, 09 January 2021
Sabti 9 January 2021
Barnaamijka Caweyska Washington, waxaa soo diyaaryay oo soo jeedinaya, Cabdixakim Maxmuud Shirwac.
Barnaamijka Caweyska Washington ee toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan qodobo xiisa leh oo ay ku jirto xubintii Hal-abuurka Heesaaga oo aad toddobaadkan ku dhageysan doontaan qeybtii 2-aad ee wareysi ay Barnaamijka Caweyska siisay fannaanadda Idil Barkhad.
Barnaamijka Caweyska Washington, waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya, Cabdixakim Maxmuud Shirwac.
Barnaamijka Caweyska Washington ee toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan qodobo xiisa leh, waxaana ka mid ah: Nin sabool ah oo ku taajiray dhagax gurigiisa ku soo dhacay.
Barnaamijka Caweyska Washington ee toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan qodobo xiisa leh, waxaana ka mid ah: Bissad xabsi ay ku xirneyd ka baxsatay? Muxuuse ahaa danbiga loo haystay?
WASHINGTON D.C. — Barnaamijka Caweyska Washington ee toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan qodobo xiisa leh, waxaana ka mid ah: Baarlamaanka Yurub oo fadhi ka yeeshay magaca loogu yeerayo cuntu fudud!
Caweyska: Gabar Soomaali ah oo Qaadday Tartan Dhanka Quruxda ah
Barnaamijka Caweyska Washington ee toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan qodobo xiisa leh oo ay ka mid tahay sida ay baraha bulshadu dadka u badbaadin karaan haddii dhanka wanaagsan loo adeegsado.
Barnaamijka Caweyska Washington ee toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan qodobo xiisa leh oo ay ku jirto xubintii Hal-abuurka iyo Heesaaga. Toddobaadkan waxaa noo marti ah fanaanadda Caraweello oo aan idiin soo gudbin doonno qeybtii 1-aad ee wareysi ay siisay Barnaamijka Caweyska Washington.